शब्दकोश: May 2011
Blue City ~ Blue Mimosa
अलकत्रे कालो सडकमा नीलो सर्ने गरी झरी वर्षिन्छ । मनसुन सुरु भएको भने होइन है ! शिरीषको फूलको वर्षा कुनै झरीभन्दा कमको छ र ? तपाईँको काठमाडौंका सडकमा बैशाख-जेठको हप्प गर्मीमा यस्तै निलाम्मे शीतल बटुल्न पाइन्छ । तपाईं यसबेला यो सहरमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कुन्नि, मैले भने सडकको चक्कर मार्दा वरिपरि शिरीषैशिरीषको सरगम बजिरहेको पाएँ । अब त यसपाली यो सरगम पनि सुक्ने बेला भयो । यसैपाली सडक परिक्रमा गर्दा देखिएका नीलाम्मे दृश्‍य तस्बिरमा कैद गरेको छु -
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, May 27, 20116: Comments
आत्मप्रकाशनभन्दा परको आनन्द
भनिन्छ, आत्मप्रकाशनमै छ आत्मिक तृप्‍ति । लेखेर-बोलेर मनभित्रका उहापोह बाहिरी संसारलाई पढाउँदा-सुनाउँदा अपार खुसी मिल्छ रे ! सत्य हो एक हदसम्म । तर यो सत्य आंशिक मात्र हो कि भन्ने लाग्छ । आफूलाई अभिव्यक्त गराउने खुसीभन्दा पर अरूको उकुसमुकुसले पनि मुखरित हुने पुल बन्ला कि भनेझैं हामीलाई पर्खिरहेको हुन्छ । हामी कति त्यो उकुसमुकुसको नजिक पुगेर हावा खुस्काएर त्यसमा ताजगी भर्न सक्छौं भन्ने मूल प्रश्‍न हो । अरूको भाव उतारेर त्यसमा बोली भरिदिनुमा चाहिँ झन् दोब्बर खुसीको भेल उर्लिने रहेछ । भोकले आकुल-व्याकुल कोही मान्छेलाई खान्की दिएपछि त्यो व्यक्तिको मुहार छाएको तृप्‍ति देखेर तपाईं आफैं पनि मुस्काउनुभएको छैन र कुनै बेला ? अरूको खुसीमा भागीदारी भएर तपाईँले पनि सुखद अनुभूति गरेको हुनुपर्छ केयौं पटक । समाजसेवाको थालनी पनि यस्तै आनन्दको लाभ लिने ‘लालसा’का साथमा भएको हुनुपर्छ । यहाँनेर समाजसेवामा लालसा शब्द जोडिएकोमा आपत्ति पनि मान्न सकिएला, तर यो लालसा अरूलाई दिएर आफू टन्न भएको प्रफुल्ल भाव सञ्चय गर्ने चाह मात्र हो । यो कुनै भ्रष्‍टाचार होइन ।
भ्रष्‍टाचार हो भने त्यस्तो खुसीको एउटा लुटेरा म पनि हो । सन्दर्भ फेसबुक सञ्जालमा रहेको मेरो फोटो एल्बम Creator’s Corner को हो । [हेर्न आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा लग इन गरिसकेपछि यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।]
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, May 20, 20113: Comments
Labels: तस्बिर, प्रसङ्गवश
ख्वाबो ख्यालो का एक बडा ही सुन्दर शहर है काठमान्डू
किसी के लिए अमृत किसी के लिए जहर है काठमान्डू ।
बडी बोतलों से पिलाये या फिर किसी की नशीली आँखो से,
हर किसी को पिनेके लिए मय का नहर है काठमान्डू ।
जीधर देखो यारों उधर सिर्फ फैसन ही नजर आए,
सच कहो तो फैसन की बदलती लहर है काठमान्डू ।
एक बुंद पानीके लिए तरसते है कितने लोग यहाँ,
हाला कि खुद ही एक खूबसुरत बहर है काठमान्डू ।
२०६२ सालको कुनै समयमा उसले लेखेको थियो यो गजल । पर्सा जिल्लाको हावापानी खेप्दै हुर्किए पनि कलेज पढ्न काठमाडौँ पसेसँगै राजधानीको नरमदेखि गरमसम्मका रहनसहन र यहाँका मान्छेहरूको अजब लीलाहरूको विश्‍लेषणस्वरूप यो गजल लेखेको थियो । उसलाई अझै पनि लाग्छ, सहरका अधिकांश मान्छे घिरौलाको जालो जस्तै रुखासुखा र संवेदनाको एक अंश पनि शेष नबचेका प्राणी हुन् । हेर्दा झट्टै बोलिहाल्ला जस्तो गुडिया, तर कागज कोचिएर तयार ! तर प्रस्तुत गजलमा काठमाडौँलाई यसको बदलिँदो रूपमा केलाए पनि सौन्दर्यकै भाकामा हेरेको छ उसले । छिटफुट लेख्‍ने उसले उर्दू र हिन्दीको खिचडी सान्निध्यमा रत्तिएको फलस्वरूप हिन्दी गजलमा अभिव्यक्त हुन सहज मान्यो । नाम उसको गनी
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, May 17, 20114: Comments
Labels: युवा पुस्ता, व्यक्तित्व
रातो पछ्‌यौरी ओढेर को आइरहेछ ?
यसपाली लामो समयसम्म दिमागमा आउँ परेन, सोचेँ – यसरी त व्याकुलताले मनमै आउँ पर्छ । सधैंजसो ब्लगमा केही गुदी भर्न तम्सिने मन खल्लो भइरह्‍यो । यसो कम्प्युटरको दराज खोल्दा विभिन्न समयमा खिचेर क्यामेराबाट खन्याइएका तस्बिरहरू तह-तह रै’छन् । त्यसमा पनि भर्खरै महिना दिन जति अगाडि शिवपुरी राष्‍ट्रिय निकुञ्ज हुँदै सुन्दरीजलको यात्रामा जाँदा गुराँसमय जङ्गलको तस्बिरहरूले लोभ्याए । यसपाली तिनै फोटो सदुपयोग गर्न मन लाग्यो ।
राष्‍ट्रिय फूल लालीगुराँस पहिलोचोटि आँखाभरि सँगाल्न पाउँदा असीम शीतल अनुभूति नहुने कुरै भएन । वनैभरि सैनिक टुकडी जस्तै छपक्कै छरिएको
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, May 11, 20114: Comments
म त आफैं मरेको थेँ, आफैं ...
छिया-छिया पारेँ भन्यौ
मैले नै मारेँ भन्यौ
तिमी सदियौंदेखिको खेलाडी
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, May 02, 2011 1 : Comments